Xumbada Acoustic, Caqabada Dhawaaqa, Acoustic Diffuser - Vinco
SOO SAARKA WAAWEYN
Boqolaal macaamiil ku qanacsan
yaa vinco ah
Qalabka Shenzhen Vinco Soundproofing Co., Ltd wuxuu ku takhasusay qalabka daboolista sanado badan wuxuuna siiyaa R&D, wax soo saarka, iibinta iyo adeegga iibinta alaabada kadib.
Badeecadaha Vinco waxay daboolayaan qaybinta Waxqabadka, guddiyada saqafka, xumbada dhawaaqa, daboolida darbiga, daboolida sagxadda, daboolida saqafka, daboolida biibiilaha, guddiyada dhawaaqa, dahaarka codadka, guddiyada nuugista, qalabka dahaarka, xumbo-nuugista codka iyo iwm.
Vinco wuxuu diiradda saarayaa awoodaha maxalliga ah inta uu indhaha ku hayo adduunka, labada qof ee hal -abuurka xooggan, tayada la isku halleyn karo iyo waxqabadka qiimaha sarreeya, alaabada Vinco aad bay caan ugu yihiin macaamiisha.
Waxaan haynaa mashiinno kombiyuutar si otomaatig ah loo kontoroolo iyo shaqaale farsamo oo xirfad leh si loo hubiyo badeecadeena tayo sare leh. Iibintayada sannadlaha ah waxay gaari kartaa ilaa 500,000 mitir oo laba jibbaaran oo ah Qalabka Daboolida Dhawaaqa, alaabta Acoustic, kala -guurka la dhaqaajin karo, Qalabka Isku -dhafan. Ku soo dhowow inaad booqato warshadeena si aad u dhisto xiriir iskaashi ganacsi oo muddo dheer ah. Waxaan ku siin doonnaa adeegga ugu fiican, tayo weyn iyo qiimo tartan.
• 2015 — Ballaarinta miisaanka wax -soo -saarka, iibinta bil kasta in ka badan 200,000 oo mitir oo laba jibbaaran oo ah qalabka dhawaaqa
• 2012 — Shirkaddu waxay haysaa daraasiin warbixinno imtixaan oo cod ah.
• 2011 — Badeecadaha Shirkadda waxaa lagu iibiyaa adduunka oo dhan.
• 2009 — Shahaadooyinkii la gaaray ee SGS, CE, CMA, ilac-MRA, CNAS.
• 2007 — Furitaanka warshadda Qalabka Vinco Soundproofing ee Shenzhen oo lagu bilaabay wax-soo-saar ballaaran.
• 2003 —Shenzhen Vinco oo ah shirkad qalab samaysa dhawaaqa.
Tayada waa mid ka mid ah ahmiyadeena ugu sarreeya.
Si joogto ah u hagaaji heerka maareynta si macaamiisha looga dhigo kuwo la hubo.
Si adag u xakamee si waafaqsan jaangooyooyinka si loo hubiyo 100% heerka u qalma ee tayada rarka.
Aragtida:Si aad u noqoto saaxiib lagu kalsoon yahay macaamiisha caalamka. Si loo bixiyo qiimaha ugu sarreeya ee macaamiisha, shaqaalaha iyo saamileyda.
Hawlgalka: Si loo bixiyo adeegyo tayo sare leh, waqtiyeysan oo lagu qanci karo soo-saarka guddida acoustics-ka iyo isu-imaatinka.
warshadaha aan u shaqayno
Badeecadaha Vinco waxay daboolayaan qaybinta Waxqabadka, guddiyada saqafka, xumbada dhawaaqa, daboolida darbiga, daboolida sagxadda, daboolida saqafka, daboolida biibiilaha, guddiyada dhawaaqa, dahaarka dhawaaqa, guddiyada nuugista, qalabka dahaarka, xumbo-nuugista dhawaaqa iwm.
Ilaalinta gaadiidka looxa oo codka si fiican u nuugaya, dayactirka maalinlaha ah iyo hababka nadiifinta
Toban faa'iidooyin oo ka mid ah alaabta loox-dhuuqaysa
(1) Biyo-la'aan iyo qoyaan-caddayn. Dhibaatada alaabta alwaaxda bei ...
Waa maxay farsamada dhismaha ee loox-nuugista
1. Waa maxay hannaanka dhismaha ee looxa dhawaaqa nuugaya? C ...
Sidee loo kala saaraa tayada guddiyada nuugaya codka? Kaliya fiiri 6 dhinac
Tayada guddiyada nuugaya codka ayaa go'aamisa codka-nuugista ...
Sida loo doorto agabyada dhawaaqa? Iyo adeegsigaas kala duwan
Saddex agab cod -wadareed oo caadi ah Acoustic materials (inta badan waxaa loola jeedaa ...
Diyaargarowga hordhaca ah ee rakibidda looxyo dhawaaqa nuugaya
Kuwa soo socda waa shaqada diyaarinta ee rakibidda woode ...
Sida loo doorto alaabta guriga lagu xiro?
Shan hababka dahaarka dhawaaqa ee caadiga ah, oo loo baahan yahay in la waafajiyo ...
Sidee loo sameeyaa darbiyada gudaha ee aan codka lahayn? Waa maxay nooca derbiga aan codka lahayn ee wanaagsan?
Sidee loo sameeyaa darbiyada gudaha ee aan codka lahayn? 1. Meelaynta laastikada ...
Isticmaalka gudaha maxaa saamayn ah maaddada dahaarka ee codka wanaagsan?
Waxaa jira agabyo badan oo dahaar ah oo gudaha ah, waxaana jira als ...
Guddiyada dhawaaqa nuugaa waxay leeyihiin qalabkaas gaarka ah ee kala duwan
Nooca ugu horreeya ee dhawaaqa nuugaya guddiga-polyester fiber-nuuga ...